Otu esi zoo foto na gam akporo iji zipu ha n'enweghị nsogbu | Gam akporosis
Anyị na-eweghachite nkuzi nkuzi vidiyo gam akporo ọhụrụ, oge a agbadoro ndị ọrụ niile na-achọ ịnwe nchekwa na nchekwa nke nzuzo mgbe ha na-eziga foto ha site na gam akporo. Yabụ, taa aga m akọwara gị ọmarịcha ngwọta ga-enyere anyị aka encrypt foto site na gam akporo iji zipu ha n'enweghị nsogbu Site na email ma ọ bụ ngwa izipu ozi nke na-enye ya ohere, dị ka Telegram maka gam akporo.
Anyị ga-emezu nke a n'ụzọ dị mfe, dị mfe na ibudata na ntinye nke ngwa n'efu maka gam akporo na anyị ga-enwe ike ibudata ozugbo na Playlọ Ahịa Google, ụlọ ọrụ ngwa ngwa maka gam akporo. Yabụ ugbu a ị mara, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata etu nye gị gam akporo amara nche na karịsịa na foto na ozi ị zipuru site na soshal midia ma ọ bụ email, M na-adụ gị ọdụ ka ị ghara ịhapụ nkọwa zuru ezu nke vidiyo agbakwunyere na m hapụrụ gị na mmalite nke isiokwu a, yana ị pịa «Nọgidenụ na-agụ nke a post» inwe uzo zuru ezu na nbudata nke ngwa a choro iji nweta ya.
Ngwa anyị na-ekwu maka ya, a oké mkpa ngwá ọrụ maka nche na nzuzo nke foto gị, ma ọ bụ iji zipu ha ma ọ bụ iji chekwaa ha ezoro ezo na gam akporo gị, na-aza aha Nzuzo Ozi Elite, nke m na-ahapụrụ gị njikọ njikọ maka nbudata na njedebe nke post a.
1 Mana gịnị ka Nzuzo Ozi Elite na-enye anyị?
2 Budata Ozi Nzuzo Elite n'efu na Playlọ Ahịa Google
Mana gịnị ka Nzuzo Ozi Elite na-enye anyị?
Nzuzo Ozi J.Randall si a ọrụ interface dị mfe ma kensinammuo dị ka o kwere, na-enye anyị ohere nke izo ya ezo ma ọ bụ kagbuo foto na ozi ederede dị ka ogologo oge foto ma ọ bụ ozi ndị a bụ ihe ezoro ezo site na ngwa ahụ n'onwe ya.
Ofdị nke nzuzo zoro ezo na nke enwere ike ịnweta decryption naanị site na iji otu ngwa ahụ na dị cMara igodo nzuzo na anyị ejirila zoro ezo nke foto ma ọ bụ ozi.
Iji ngwa iji encrypt ma ọ bụ decrypt foto ma ọ bụ ozi ederede dị mfe dị ka họrọ nọmba igodo, nọmba nke anyị ga - ahọrọ ka ọ masịrị anyị na ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ ọnụọgụ dị ka anyị chọrọ, nke, dịka o siri bụrụ ihe ezi uche dị na ya ma anyị ga - amata maka nbibi nke ozi ndị a ma ọ bụ foto ezoro ezo site na ngwa ahụ. Ozugbo ahọpụtara ọnụọgụ ọnụọgụ a, naanị anyị ga-apịnye ozi ahụ ka ezoro ezo ma ọ bụ debie ma ọ bụ chọta foto iji zoo ma ọ bụ mebie ma pịa na bọtịnụ kwekọrọ. Dị mfe ma dị mfe!
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na anyị ga-aga n'ihu izipu ozi ederede ezoro ezo na ngwa ahụ, ozi ederede ezoro ezo ma ọ bụ foto ezoro ezo, onye nke ọzọ ma ọ bụ ndị anyị ga-ezigara ozi ma ọ bụ foto ndị a, dị ka ezi uche na ma eleghị anya, na mgbakwunye na-enwe ngwa ebudatara ma wụnye na gị gam akporo, ị ga-enwe na mbụ mara ọnụọgụ ọnụọgụ ejiri maka izo ya ezo nke otu.
Agbanyeghi na priori kọwara gi odi ka o gha agbagwoju gi anya, nke bu eziokwu bu na odi nfe karie ka odi, nke a mere m jiri hapuru gi video nkuzi na iji ngwa, nkuzi vidio ma ọ bụ ntuziaka bara uru nke ngwa nke m na-egosi gị nzọụkwụ site na usoro nke izo ya ezo na ntinye ederede ederede na foto.
Budata Ozi Nzuzo Elite n'efu na Playlọ Ahịa Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi zoo foto site na gam akporo iji zipu ha n'enweghị nsogbu (yana kwa ozi)
Kedu ihe ị ga-esi kwuo maka ezoro ezo, ma na-ahọrọ 'okwu' iji zoo.
4 Ngwa Google nke ị na-agaghị echefu